यस कारण गुम्न सक्छ कम उमेरमै तपाईको स्मरणशक्ति, बढाउन खानुहोस् यस्ता खाना - BM Nepal
काठमाडौँ । मानव जीवनमा स्मरणशक्तिको ठूलो महत्व छ । स्मरणशक्ति तेज भएका मानिसहरुले हरेक क्षेत्रमा चाँडो प्रगति गर्न सक्छन् । कमजोर हुनेहरु पछि पर्छन् ।
– क्रोध, भय, चिन्ताले स्मरणशक्तिलाई प्रभावित तुल्याउँछन् । उच्च रक्तचाप, डिप्रेसन, पेनकिलर औषधीको बढी प्रयोगको साइड इफेक्ट स्मरणशक्तिमा पर्न जान्छ ।
Prev खानामा रुचि घट्दै गएको त छैन ? सर्तक रहनुहोस् ! हुनसक्छ पेटको क्यान्सरको लक्षण
Next लक्ष्मीलाई खुसी राख्न यी चिज चढाउनुस्, बन्नुहुनेछ मालामाल